China HENGYITONG Smart yokuhambisa mqengqeleki Drive, Xhasa Logistics smart ukuba iterate ngokukhawuleza mveliso kunye nabenzi | IHarmonic
HENGYITONG Smart yokuhambisa mqengqeleki Drive, Xhasa Logistics smart ukuba iterate ngokukhawuleza
Emva kokusasazeka kwe-COVID-19 corona-virus iyakulawulwa, inkqubo yokuhanjiswa kwempahla iya kwakhiwa ngokutsha, umzi mveliso we-smart logistics oxhaswa ziitekhnoloji eziphezulu ezinje nge5G, ubukrelekrele bokufakelwa kunye nedatha enkulu iya kuzisa uphuhliso olukhulu. Kulindeleke ukuba kwiminyaka emihlanu ezayo, ukupakishwa okuluhlaza kunye nokugcina uluhlaza kuzakukhuthazwa kwaye kusetyenziswe. Ifom eqhubayo ye-smart logistics sisicelo esinzulu kunye nokudityaniswa okunzulu kobukrelekrele bokwenza kunye nezixhobo ze-smart. Iitekhnoloji eziphambili ezinje ngokunxibelelana kolwazi, ukuhanjiswa kwedijithali, kunye nokwenza izigqibo ezikrelekrele kuya kuba kokokuqala ukusetyenziswa kutshintsho kunye nokuphucula ishishini lezinto. Njengengxenye ebalulekileyo ye-smart logistics, inkqubo yokukhetha ngokukhawuleza ekrelekrele iya kuba yinto ephindaphindayo yokuphucula ukusebenza kwenkqubo yokusebenza. Phakathi kwabo, ukuveliswa nokuphuculwa kwetekhnoloji ye-Smart Conveyor Roller Drive iyeyona nto iphambili ekuphuculeni ukusebenza ngokuhlengahlengisa.
ISmart Conveyor Roller Drayivu yindlela yokuchaneka kokuchaneka kunye ne-servo motor edityanisiweyo kwigubu, iipesenti ezingama-90 zeemveliso ezisetyenziswa ngoku ziinkampani zamalungiselelo asekhaya zixhomekeke kwimveliso zaseYurophu, eMelika naseJapan, kuba ukusetyenziswa kancinci kwesixhobo kufuna iteknoloji ephezulu kunye nenkqubo. Kwicandelo lezinto ezilula zokulayisha umthwalo kunye nokuhanjiswa, iimveliso ezineyona nxalenye iphezulu yi-INTERROLL yaseJamani, iKYOWA yaseJapan. Kukhetho olunzima lomsebenzi kunye nokusasaza, I-Seapark yase-US yinkokeli yentengiso, kunye nokugcinwa okunengqiqo kunye nomzi-mveliso wento yokupaka egaraji-ntathu nayo inesabelo sentengiso esithile.
ISmart Conveyor Roller Drayivu, eneenkampani zamalungiselelo enkqubo ngenxa yobuchwephesha bodwa, ineendleko eziphezulu zokuthenga kunye nesantya sokuphendula kwenkonzo. Ukujolisa kwingxaki yexesha elide yamashishini olungiselelo, ukwenzela ukwaphula ubunini kunye nokunciphisa iindleko zamashishini amashishini, uHengyitong uphuhlise ngempumelelo amabakala amancinci amancinci naphakathi e-servo iimoto ezihamba ngasemva emva kophando lwemarike kunye nokuhlolwa kobuchwephesha, kwaye yeyokuqala ukuyityhala kwintengiso yehlabathi.
Uhlalutyo lweziganeko zesicelo sokucwangciswa kwemisebenzi kwishishini lokwenza izinto, kwi-oyile yokuntywila yokuhambisa iRoller Drayivu, uyilo lolwakhiwo lusebenzisa igrisi yokuntywilisela ngaphakathi ukuthambisa nokuhambisa ubushushu. Uyilo kunzima ukuphepha ingxaki yokuthanjiswa kwefilimu yokuthambisa ebangelwe bubushushu obuveliswe ligubu ngexesha lokuhamba ngesantya esiphezulu, kuba ingxaki yokufudumeza igubu lombane ayinakuphepheka ngexesha lokusebenza ngesantya esiphezulu.
Umphunga weoyile yokuthambisa eveliswe kukusebenza kwetorque kunye nesantya kuya kuzisa ukunyuka koxinzelelo oluqhubekayo kwisigubu esivaliweyo. Xa iigigi zibandakanyeka ngesantya esiphezulu, uxinzelelo oluphezulu lunokunciphisa kuphela uxinzelelo lwangaphakathi ngokucinezela ioyile yokuthambisa kwisikhewu esiphakathi kwendawo yokunxibelelana kumacala omabini esigqubuthelo sokugqibela. Ngenxa yesizathu esingentla, uxanduva lwezinto ezinzima zokuhlela abathengi ziya kubonisa imeko yokuvuza kweoyile ukusuka kwi-Conveyor Roller Drive.
Ukuze usombulule ingxaki yomsebenzisi, i-HENGYITONG isebenzisa izinto ezintsha ukuqhuba ukwenziwa koyilo, khetha ukongeza isakhiwo sokukhupha i-valve kwiseva yokuphela kwemoto, emva kokuba i-Smart Conveyor Roller yenziwe, igumbi ligxothiwe ukuze kuqinisekiswe ukuba isondo Ukusebenza kwindawo engenanto, ekhupha indawo ehambelana neoyile kunye negesi, kwaye iyishenxise ngokupheleleyo ingxaki yokuvuza kwe-oyile phantsi komthwalo onzima. HENGYITONG wakhokela ekwamkeleni obu buchwephesha kolu shishino, kwaye isicelo qamba kunye nobugcisa patent kolu lwakhiwo eyodwa uyilo.
ISmart Conveyor Roller Drive licandelo eliphambili elisebenza ngokuqhubekekayo kwaye libaleka ngesantya esiphezulu. Ngale teknoloji ye-HENGYITONG enelungelo elilodwa lomenzi, ubushushu bayo bendawo yokusebenza bunokulawulwa ngokufanelekileyo ngaphakathi kwe-45 ℃. Ayaneli nje ukuhlangabezana neemfuno zokuxinana komoya, kodwa ayinayo imeko yokunqongophala kweoyile kunye nokutsha komile, kodwa ikwandisa ubomi benkonzo yemveliso kwaye ifezekise ezona ziphumo zingabizi kakhulu kubomi bonke benkonzo, Iqaqambisa Uphando lwenzululwazi olunzima kunye nophuhliso lweHENGYITONG kunye namandla okuqhubekeka phambili.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba i-HENGYITONG ilandela ngokusondeleyo inkqubela phambili yetekhnoloji yokuvelisa ekrelekrele, ijolise kwaye iphule ngokupheleleyo itekhnoloji yexesha elide kunye neendleko zokulawulwa kweempawu ezithile kwi-Smart Conveyor Roller Drayivu, izixhobo ezingundoqo zokwenza izinto ezikrelekrele, Inika iindleko ezingaphezulu -Ukukhetha okusebenzayo kumzi-mveliso okrelekrele wehlabathi, ngakumbi ishishini lokuhanjiswa kwezinto, inguqu kunye nokuphuculwa kokugcinwa kunye neenkqubo zokuhlela
Ixesha Post: Apr-17-2020